एफएनसिसिआईको चुनाव सार्न म नै लागेको हुँ, तर कुनै षड्यन्त्र हैन - Artha Path Artha Path
शेखर गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ
नेपालको पहिलो उद्योगीको परिवारबाट आएको हु । १७ हजारलाई रोजगारी दिइरहेको छु ।
सरेको–सर्यै छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव कहिले हुन्छ ?
भर्खरै हाम्रो पदाधिकारीको बैठकमा ३ वटा सुझाव प्राप्त भएको छ । त्यसैअनुसार अब मंसिर ११ र १२ गते चुनाव गर्ने सहमति भएको छ । यसका लागि पहिले गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । स्वीकृति पायौं भने निर्वाचन गराउने प्रस्ताव कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
निर्वाचन पछि सार्नका लागि तपाईँहरूले पनि भूमिका खेल्नुभयो भन्ने आरोप लागेको छ । त्यसो गर्नुको कारण के हो ?
मैले पक्कै पनि यस काममा भूमिका खेलेको छु । अहिले हामी सबै कोरोना भाइरसको त्रासपूर्ण समयमा छौं । यसबाट बच्न सरकारले लामो समयसम्म जनतालाई घरभित्रै बस्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले पनि अवस्था सामान्य भएको छैन । यही जोखिमलाई ध्यान दिएर चुनाव सार्ने निर्णय भएको हो । मलाई एउटा के कुराको विश्वास छ भने, हाम्रो संस्था राज्यको नियम कानुनभन्दा माथि होइन । जब राज्यले निषेधाज्ञा वा लकडाउन गर्छ, त्यस्तो बेला चुनाव गराउनु उद्योग वाणिज्य महासंघजस्तो गरिमामय संस्थालाई शोभा हुँदैन ।
यस्तो बेला ज्यानको जोखिम लिएर निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । सबै जिल्लाबाट जब साथीहरू यहाँ आउँछन् । ठूलो संख्यामा मानिसको भेला हुन्छ । त्यहीँबाट रोग संक्रमित भएमा एकैपटक पूरै देशभरि यो रोग जान्छ । यसको जिम्मेवारीबोध भएकाले हामीले चुनाव सारेका हौं । यसमा कुनै राजनीति गरिएको होइन । कुनै समूहलाई हराउन वा जिताउन भनेर जुन आरोप लागेको छ, त्यस्तो सबै वाहियात तर्क हुन् । यो कुरामा कुनै आधार छैन । म त अध्यक्ष हुने मान्छे, कार्यभार सम्हाल्न आतुर छु । मैले किन ढिलो गर्नुपर्ने र ? बरु हतार त मलाई हुनुपर्ने हो । मैले हतार नगरेको एउटा कारण हो– जिम्मेवारी बोध । उद्योग वाणिज्य महासंघमा हाम्रा बाऊ–बाजेले पनि रगत पसिना बगाउनु भएको छ । दाइहरूको योगदान पनि त्यस्तै छ । यो संस्थाको गरिमा कम हुने कुनै पनि काम म गर्न सक्दिनँ । चुनाव ढिला हुनुमा कसैले षड्यन्त्र गरेको होइन । योमात्र जिम्मेवारी बोधको नतिजा हो । यो देशको भावनात्मक नाता जोडेको संस्था भएकाले खेलवाड गर्नु हँुदैन भन्ने आशय मात्र हो । यो बाहेक कुनै कारण छैन ।
आखिर जोसुकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष आए पनि अध्यक्ष तपाईँ नै हो । के फरक पर्छ ? तर तपाईँ त एउटा समूहलाई जिताउन खुलेर लाग्नुभयो नि ?
तपाइँले भन्नुभएकोमा म एकदमै सहमत छु । अहिले जब नयाँ विधान आयो, त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने प्रावधान ल्याउनुको कारण पनि एउटा समूहको बाहुल्यता नहोस् भन्ने नै हो । जो अध्यक्ष बन्छ त्यो सबैको अध्यक्ष होस् भन्ने विधान संशोधनको मर्म थियो । जब हाम्रा अग्रज, अभिभावकले ‘शेखर गोल्छाको हैसियत के छ ?’ भनेर खुलेआम अन्तरवार्ता दिनुहुन्छ । ‘म उसलाई ६ महिनाभित्रमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर फालिदिन्छु’ भन्नुहुन्छ । मैले कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिला नै जव यस्ता गैरजिम्मेवार टिप्पणी आउँछन्, त्यो पनि हाम्रै भिभावकबाट । मेराविरुद्ध त्यस्तो कुरा आएपछि मनमा चिन्ता हुनु जरुरी छ । फोटो झुण्ड्याउनको लागि म महासंघको नेतृत्वमा जान लागेको होइन । म निजी क्षेत्रको लागि केही गर्न सकियो भने मेरो कार्यकाल सफल हुन्छ भन्ने उद्देश्यले गइरहेको छु । तर यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति आउँछन् र धेरै साथीहरू उनकै पछि लाग्छन् भने मैले पनि सोच्नैपर्ने हुन्छ । यही कारण मैले आफ्नो पदीय सुरक्षाका लागि बाध्यता भएर एउटा समूहमा लाग्नु परेको हो । नत्र भने यसो गर्न मेरो कुनै उद्देश्य, इच्छा थिएन । यसका लागि मलाई हाम्रा केही अभिभावकले बाध्य गराएका हुन् ।
तपाईँले समर्थन गरिरहनुभएको समूह जितेर आउन सकेन भने के गर्नुहुन्छ ?
भोलि नेतृत्वमा जोसुकै आए पनि मैले काम गर्नैपर्छ । मेरो त्यो बाध्यता छ । तर मैले दुईवटै समूहका साथीहरूलाई यसबारे आफ्ना कुरा राखिसकेको छु । आफ्ना भावी योजनासमेटेर ‘भिजन डकुमेण्ट्री’ पनि बनाएको छु ।
तपाईँले नचाहेको समूह चुनिएर आयो भने त तपाइ“लाई फाल्ने राजनीतिक खेल सुरु होला नि ?
पक्कै पनि अर्को टीम आयो भने काम गर्न असहज हुनसक्छ । मैले एउटा समूहलाई समर्थन नगरेको भए पनि ६ महिनाभित्र फालिदिन्छु भनेको छ भने मेरो लागि अध्यक्षको कार्यकाल दुबै तरिकाले सहज नहुने देखिएको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि म तयार छु ।
लामो समयदेखि महासंघमा गुटबन्दी भएकाले यस संस्थाको साख गिर्दै गएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
गुटबन्दी, राजनीति यो सबै कुरा महासंघजस्ता संस्थामा हुन्छन् । जुन संस्था चलायमान छ, जहाँ सबैजना नेतृत्व लिन चाहन्छन्, त्यस्ता संस्थामा राजनीति र गुटबन्दी हुनु स्वभाविक हो । म यसलाई नकारात्मक मान्दिन । चुनाव सकिएपछि एउटै गुट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हामी जुन उद्देश्यले महासंघमा आएका छौं, त्यो उद्देश्य पूर्तिका लागि एक ढिक्का हुनुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । तर, चुनावअघि राजनीति र गुटबन्दी हुनु स्वभाविक हो । यो एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो । यसलाई नकारात्मकरुपमा लिन आवश्यक देख्दिन ।
महासंघको प्रतिस्पर्धामा चेम्बर, सीएनआईजस्ता संस्था आइरहेका छन् । उनीहरू देशव्यापीरुपमा आफ्ना सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा महासंघको औचित्य कम भएको हो ?
यो कुरालाई म स्विकार गर्दिन । किनभने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ करिब ५५ वर्षको इतिहास बोकेको संस्था हो । नेपालको नीति–नियम र जति पनि कानूनहरू छन्, त्यसमा महासंघले भूमिका खेलेको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई यहाँसम्म पु¥याउनमा महासंघको ठूलो देन छ । हामी व्यावसायिकजगत्को तल्लो तहसम्म संगठित छौं । ७७ जिल्ला, हरेक नगरपालिकामा हाम्रा सदस्य छन् । सबै बस्तुगत व्यवसायी हाम्रा सदस्य छन् । त्यस्तै, १ हजार एशोसिएट कर्पोरेट हाउसहरू हाम्रो सदस्य छन् । यो आकारमा अरु कुनै संगठन छैन । अरु संगठनले पनि एउटै उद्देश्यका लागि काम गरिरहेका छन् भने त्यसलाई म प्रतिस्पर्धा मान्दिन । किनकी निजी क्षेत्रको स्वार्थको लागि काम गरिरहेका छन् भने कसरी प्रतिस्पर्धा भयो ? सबै हामीलेकाम गर्दै जाने हो र निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै जाने हो ।
तोकेको मितिमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
कार्यसमितिले अनुमोदन गर्न बाँकी नै छ । अनुमोदन भइसकेपछि हामीले जहाँसम्म
हुन्छ, काठमाडौंमै साधारणसभा गराउने छौं । काठमाडौंमा गराउन सकिएन भने हामीले हरेक प्रदेशबाट जिल्लाको गराउने भन्ने विषयमा छलफल चलेको छ । एउटा बाधा अड्काउ फुकाउ यसलाई कार्यसमितिमा लगेर दुईटैको मेण्डेट लगेर हामी अगाडि बढ्छौं । मलाई लाग्छ, यो मितिमा चुनाव गराउँछौ ।
तपाईँहरू कोभिडको कारणले चुनाव सार्दै हुनुहुन्छ, उहारू आज–भोलि नै चुनाव गर्नुपर्छ भन्नुको कारण के हो ?
मलाई लाग्छ, जुन पक्षले आज–भोलि नै गर्नुपर्छ भनेका छन् । उनीहरू अहिलेको स्थितिलाई सायद नबुझेको हो कि । यो कुरा उहाँहरूलाई सोद्धा ठिक होला किनभने कसैको ज्यान जोखिममा राखेर, सरकारको निर्देशनलाई पालना नगर्ने हो भने यो दुभाग्र्यपुर्ण छ ।
तपाईँहरूले निर्वाचनचाहि स्थगित गरेर आफ्नो पक्षमा बहुमत बनाउने कुनै आशय हो ?
म काम गर्नको लागि महासंघमा आएको हुँ । म एउटा नितान्त उद्योगी व्यवसायी इतिहास बोकेर आएको मान्छे हुँ । अहिले पनि १७ हजार जनालाई रोजगारी दिइरहेको छु । देशको प्रथम उद्योग राखेको परिवारबाट म आएको हो । झन्डै १०० वर्षको इतिहास बोकेको संस्था हो । म उद्योग वाणिज्य महासंघमा केही काम गरौँ र निजी क्षेत्रको स्वार्थलाई अझै पूर्ति गरी बलियो बनाउने प्रयास गरौं भन्ने चाहना राख्छु । लगानी देशमा बढाउने, रोजगारी अझै सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आएको हुँ । अरु कुनै मकसद छैन । मैले गुटबन्दी गरेर वा राजनीति गरेर लामो समय टिकिराख्ने कुनै पनि स्वार्थ छैन । यो कुरा सबै साथीलाई विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।
अब स्वतः अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ, यहा“सम्म आउन धेरै ‘पापड पेल्नु’ प¥यो होला है ?
पक्कै पनि मजस्तो ब्यक्ति नितान्त उद्योगी व्यवसायी छन् । एउटा गम्भीर प्रकृतिको उद्योगी रहेको छु । त्यो आशयमा अध्यक्ष बनिरहँदा पक्कै पनि धेरै साथीहरूको माया र सपोर्ट पाएको छु । यो नपाउँदा म यहाँसम्म पुग्दैन थिएँ होला । सबै साथीले विश्वास गरेका छन् । म जब वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि निर्वाचन लडँे, आजसम्म कसैले पनि त्यति मत प्राप्त गरेका थिएन । भनेपछि साथीहरूको विश्वास र मायाले केही न केही गर्छ भन्ने सोचले यहाँ पुगेको छु । मैले यसबाट जिम्मेवारीबोध पनि छ । म केही काम गरेर देखाउन चाहान्छु ।
के के काम गर्ने प्लान बनाउनुभएको छ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम तीन वर्षमा गर्ने, पाँच वर्ष र १० वर्षमा निजी क्षेत्रले के के काम गर्नुपर्छ, के उद्देश्य हुनुपर्छ यसका लागि मैले धेरै काम गरिरहेको छु । भिजन डकुमेण्ट्री तयार पारेको छु । त्यो डकुमेण्ट्रीलाई कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराएर प्रस्तुत गर्ने छु । यसबाहेक सचिवालय सुधार, मेलमिलाप केन्द्रलाई अझै सुदृढ बनाउने लगायत अन्य धेरै काम छन् । जसलाई मैले फोकस गर्छु । तर, मेन कुराचाहिँ भिजन डकुमेण्ट्रीअनुसार अगाडि बढ्नेछु । यसमा साथीहरूको सहयोग भएन भने पक्कै पनि असफल हुने छु । एक्लै मान्छेले केही पनि गर्न सक्दिनँ । जुन पनि टिम आउँछ, त्यस टिमलाई विश्वासमा लिएर मात्रै सफलता हासिल गर्छु । अल्पकालिनमात्रै होइन, दीर्घकालिन योजना हुनेछ । यसमा हिँडियो भने उद्योग बाणिज्य महासंघले फेरि जुन एउटा साख थियो, त्यो साख प्राप्त गर्छ ।
कोरोनाले उद्योग व्यवसायमा कतिको असर गरेको छ ?
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ९७ प्रतिशत विजनेशले ७५ प्रतिशत व्यवसाय गुमाएको छ भन्ने देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको अर्को तथ्याङ्कले २२ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएको पनि देखाएको छ । आईएलओले पनि बेरोजगारी ३ गुणाले बढेको भनेको छ । यस्तो भयानक अवस्था छ । तर, हामी यो स्थितिबाट चाँडै बाहिर आउन सक्छौँ । त्यसको कारण के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित छ । रेमिट्यान्स अहिलेसम्म उल्लेख्य मात्रामा घटेको अवस्था छैन । त्यसैले गर्दा हामी चाँडै पुनरोत्थान गर्न सक्छौँ ।
निजी क्षेत्रले सरकारसग गरेका कोरोना लक्षित माग कति पूरा भए ?
केही मागहरू पूरा भएका पनि छन् । जस्तो, मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा साना तथा मझौला उद्योगहरूले प्राप्त गरुन्, त्यसमा प्रगति भएको छ । हामीले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्ने माग गरेका थियौँ । त्यो पनि घट्ने क्रममा छ । कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा लचक भएर अगाडि बढिएको छ । त्यो हिसावले राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीति खासगरी लचिलो देखिएको छ । बिजुलीमा पनि पूरा भएको छ । तर, अझै पनि बजारलाई चलायमान गर्नको लागि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई राहत दिन सकियो भने त्यो राहतले माग बढाउन सक्छ । उद्योगलाई २० प्रतिशत सहुलियत हुनुपर्ने माग गरेका छौँ । उद्योगलाई सुदृढ गरेमा रोजगार बढी दिनेछौँ ।
बादललाई हटाउन प्रचण्डको दवावपछि मन्त्रीपरिषद लगत्तै ओली–वादल रहस्यमय वार्ता
काठमाडौं । गृहमन्त्री बनेदेखीनै प्रधानमन्त्री ओली निकटमा रहदै आएका गृह मन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’लाई मन्त्रीबाट
भयावह बन्दै कोरोना उपत्यकामा थप ८०९ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या २१५०७ पुग्यो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ८ सय ९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा
दैनिक कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुने बढ्दै, आईतबार १५७३ जना कोरोना संक्रमित थपिए, १० जनाको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा थप १५७३ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भेटिएका छन् । देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको
साताको पहिलो दिन नेप्से ४.२९ अंकले बढ्यो, ३ अर्ब १३ करोडको कारोवार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोवार दिन आईतबार नेप्से नेप्से ४.२९ अंकले बढेर १५६५.५५ बिन्दुमा बन्द
बादललाई हटाउन प्रचण्डको दवावपछि मन्त्रीपरिषद लगत्तै ओली–वादल रहस्यमय
हिमालयन बैंकसंग मर्जर गर्न सिभिल बैंकले पठायो औपचारिक
छोराको जन्मदिन मनाउन हिँडेका नुवाकोट शिवपुरीका पन्तको बसको
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठसहित सात जनामा काेराेना